यस्तो पनि हुँदो रैछ जिन्दगीमा कैले कैले, जताततै शून्य अनि उराठ लाग्ने मौसम ऐले । हुन पनि अफिसमा कोरोनाको गफ, घरमा कोरोनाकै । टिभी हेर्‍यो कोरोनाकै टक ।
पत्रिकादेखि पसल पसल कोरोनै कोरोना । अब घरभित्र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ता समेत यो कोरोनाले नछाड्ने भो त । स्थिति यस्तो भइसक्यो कि अब त विश्वको नक्सामा जुन देशमा थिचे पनि त्यस देशमा कोरोना यतिमा सरे, कोरोनाले यति मान्छे मरे भन्नेमात्र समाचार आउने भएको छ । यो भाइरस लागेर नमरे पनि यसको डरले चैं मरिने भो जस्तो छ ।
घरमा बस्दा बस्दा बसको सीटमा बसेजस्तो पो हुन थाल्ने रैछ । केवल ट्वाइलेट जान उठ्यो, अनि फेरि पुरानै सीटमा । कता कता आफू इन्डियन रियालिटी शो बिग बोसको सहभागी पो हो कि जस्तो भान हुन थालेको छ ।
घरभित्र सोफामा बस्दा बस्दा गद्दीले बिझाउन थाले ओछ्यानमा डङरङ्ग पल्टिने काम छ । ओच्छ्यानमा पल्टिँदा पल्टिँदा थकाइ लागे भुइँमा लड्ने । भुइँमा पल्टिरहँदा बोर लागे फेरि सोफा, ओच्छ्यान र भुँइमा । यो क्रम दोहोरिइरहेको छ । अब घरमा भएका आफ्ना कपडा पट्याउने, फुकाउने, फेरि पट्याउने, यो क्रम डिनरमा नबोलाउन्जेल जारी राखिराख्ने योजना छ ।
घरमै बसी बसी महीनाको ५० हजार, १ लाखसम्म कमाउनुहोस् भन्ने विज्ञापन गर्नेहरू कता गए अहिले हँ ? नम्बर खोज्नुपर्ने भयो ।
मान्छेहरू अरू बेला आफ्ना लागि फुर्सद भएन भनेर रोइकराइ गर्छन् । तर अहिले घरघरमा बस्नुपरेका कारण जताततै वातावरण यस्तो छ कि यो भाइरस लागेनछ भने पनि आफैलाई भाइरस लागेसरी मानिसमा निराशा बढ्दो छ । त्यसैले यो वातावरणलाई अलिअलि भए पनि हँसिलो र रसिलो बनाउन संकलन गरिएका र आफैद्वारा सृजित केही कोरोना जोक र कमेन्ट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु ।
मन परे हरियो, नपरे रातो बटन थिच्नुभए हुन्छ ।
कोरोनाबाट कसरी बच्ने भनेर एकजना भक्तिनी पण्डित भेट्न मन्दिर पुगिछन् ।
भक्तिनी : पण्डितजी, कोरोना भाइरससँग एकदम डर लागिरहेछ । के गर्ने होला ?
पण्डित : डराउनु पर्दैन । हात थाप्नुस् त ।
भक्तिनी : पण्डितजी, आज यो पञ्चामृत अलि कडा पो छ त !
पण्डित : हत्तेरिका ! यो सेनिटाइजर पो हो त, हात सफा गर्न दिएको ।
अब हाच्छ्यूँ आउँदा ‘सरी’ भन्नुको सट्टा ‘भगवान्ले भलो गरून्’ भन्ने जमाना आयो !
पहिले जब कसैले मेरो छोरा फलानो देशबाट आएको छ भन्थे तब उसलाई भेट्न र हेर्न भीड लाग्थ्यो । अहिले कसैले त्यसो भन्यो भने त पूरै बस्ती नै खाली हुन्छ । समय समयको कुरा !
पत्नी : यो कहाँको कानून हो कि तिम्लाई सधैं मैले नै खाना पकाएर दिनुपर्छ भन्ने ?
पति : यो पूरै दुनियाँको कानून हो कि कैदीलाई खाना सरकारले नै दिने गर्छ ।
कोरोनाका बेला एकजना श्रीमान्लाई श्रीमतीले यस्तो सल्लाह दिइरहेकी थिइन् :
... बारम्बार खाली साबुनपानीले हातमात्र धुनुको सट्टा त दुई–दुईओटा भाँडा पनि साथै माझ्दिने गर्नु नि !
विदेश घुमाउन नलागेको भनेर श्रीमती धेरै दिनदेखि श्रीमान्सँग झगडा गरिरहेकी थिइन् ।
... फुर्सद भयो अब घुमाउन लान्छु नि त भनेर श्रीमान्ले भन्दा श्रीमती मानिरहेकी छैनन् !
दुई साथीहरूको गफ
पहिलो साथी : यार म त तेस्रो स्टेजमा छु ।
पहिलो स्टेजमा भाँडा माझेँ, दोस्रोमा खाना बनाएँ र तेस्रो स्टेजमा कपडा धोइरहेको छु ।
तँ नि ?
दोस्रो साथी : मैले त गालीमाथि गाली खाइरहेको छु । तर काम गर्नेवाला छैन । किनकि कोरोना त केही दिनमा जाला, तर मलाई सबै काम गर्न आउँछ भन्ने श्रीमतीले चाल पाई भने जिन्दगीभर भाँडा माझिरहन पर्छ क्या !
छुट्टीका लागि एक कर्मचारीको निवेदन :
श्रीमान् व्यवस्थापक ज्यू,
म कोरोनाबाट पीडित भएको छु । कृपया मलाई लामो छुट्टी दिएर एक महीनाको तलब तु घरमै पठाउने व्यवस्था गर्नुहोला । अन्यथा म आफै अफिस आउनेछु ।
... उसको निवेदन स्वीकृत भयो ।
एक सर्वेक्षणका अनुसार कोरोनाले गर्दा कर्मचारीहरू एकआपसमा भेट्न नपाएकाले अफिस अफिसमा चुक्ली लगाउनेहरूको संख्यामा भारी गिरावट आयो रे !
अब कसले भन्छ कि चिनियाँ सामान ज्यादा दिन टिक्दैन भनेर ?
... कोरोना नै काफी प्रमाण छ चिनियाँ सामान कति टिक्छ भनेर !
पहिलो साथी : यार, अचेल सबै मन्दिरहरूसमेत बन्द छन् त ! किन होला ?
दोस्रो साथी : ल तलाई था छैन ? सबै भगवान्हरू अहिले सेतो कोट लगाएर अस्पताल गाछन् त !
ग्राहक : साहूजी, डेटोल साबुन छ ?
साहुजी : छ ।
ग्राहक : ... त्यसोभए छिट्टो हात धोएर एक किलो चिनी दिनुस् त !
कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ मानिसको जीवनमा ।
... घरमै सुतेर पनि राष्ट्रलाई योगदान गर्न सकिने रहेछ ।
समय समयको कुरा । पहिले घरमा बस्नेहरूलाई ‘निकम्मा’को दर्जा दिइन्थ्यो, अहिले ‘जिम्मेवार’ ।
ब्यूटिपार्लर १ महीनामात्र बन्द हुने हो भने पनि कोरोनाभन्दा भयंकर रौद्र रूप घरघरमै देख्न पाइन्छ भन्ने कुरा पनि आयो ।
जोक कोरोना[२०७६ चैत, १४]
जित्नैपर्ने युद्ध[२०७६ चैत, ७]
फागु र फुंग उडेको अर्थतन्त्र[२०७६ फागुन, ३०]
कार्यक्रम शुरू हुनै लाग्यो[२०७६ फागुन, २]
एकादेशका प्रधानमन्त्री[२०७६ माघ, २४]